Amin'izao fotoana izao, ankizivavy sy vehivavy marobe no voaro amin'ny fanombohan'ny fananana vohoka tsy niriana amin'ny fanampiana ny pilina fanafody. Mandritra izany fotoana izany, ny ankamaroan'ireo vehivavy tsara tarehy mampiasa io fomba fanabeazana io dia tsy mamaritra ny mety hahazoana taranaka amin'ny hoavy.
Izany no mahatonga ny fanontaniana hoe rehefa bevohoka ny vehivavy vao teraka dia mifandray amin'ny pills. Ny ankamaroan'ny firaisana ara-drariny, amin'ny fampiasana fanabeazana hormonal ny orana, dia manomboka manahy momba ny mety ho fiantraikany amin'ny manaraka ny fahafahana mitaiza ny zaza, ary koa ny fahasalamany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao ny habetsahan'ny fitondrana vohoka aorian'ny fifehezana ny pilina fanafody, sy ny fomba hanomanana azy tsara.
Ny fandaharam-potoana ara-pahasalamana aorian'ny nanaovan'ny mpanohitra
Hatramin'ny vao haingana, ny fikarakarana ny fitondrana vohoka taorian'ny fanafoanana ny fikarakarana ny fiterahana dia tena sarotra be. Ny mpikarakara dia nanoro hevitra fa ny mpivady dia miandry ny 2-3 volana, mandalo ny fanadihadiana ilaina ary vao manomboka tsy mila fiarovana. Raha tonga teo am-piandohan'ny fe-potoana nomena ny famerenana amin'ny laoniny ny vohoka, dia tsy azo atao ny mihazona izany matetika.
Amin'izao fotoana izao dia niova tanteraka ny toe-draharaha. Tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny toetr'andro amin'ny fiandrasana ny zaza sy ny fivoaran'ny taova anatiny ny fanabeazana am-bava ankehitriny . Na izany aza, dia matetika no mitranga haingana kokoa ny famolavolana azy, satria rehefa mipetrapetraka ny fitsaboana, dia manomboka manararaotra kokoa ny oviana.
Amin'ny ankapobeny, ny fitondrana vohoka aorian'ny fiterahana fanafody, na dia lava aza, dia tonga avy hatrany. Ankoatr'izay dia maro ny dokotera mampiasa ny fomba fanafana "amin'ny fanafoanana" ny fitsaboana ny tsy fahampiana. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny tranga marobe, ny vatan'ny vehivavy dia mila fotoana vitsivitsy mba hamerenana indray ny asam-pamokarana, ary mitombo ny taona, mihamitombo ny fotoana.
Izany no mahatonga ny toe-draharaha izay tsy mitranga amin'ny volana voalohany aorian'ny fandefasana ny OC, dia ilaina ny mandinika ny fivoaran'ny toe-javatra mandritra ny fe-potoam-pahasalamana 2-3 ary avy eo dinihina amin'ny dokotera amin'ny fanadihadiana amin'ny antsipiriany. Angamba, ny sakana iray amin'ny fitadiavana fahasambarana eo amin'ny maha-reny dia aretina lehibe sy aretina isan-karazany izay mitaky fitsabahana avy hatrany.
Mety ho azo atao ve ny fitondrana vohoka?
Oviana no handray hormona antimulylerov?
Ankizy "avy amin'ny fantsona"
Museum of porcelain (Riga)
Amin'ny inona ny manao akanjo safari?
Iza no autist - ny toetra malaza indrindra-autistique
Banky ho an'ny tantely
Dresses amin'ny hariva lava 2016
Lady Gaga dia nanao sonia fifanarahana ho 14 tapitrisa dolara
10 torohevitra momba ny fomba tsy hahatonga azy ho mpanafika
Pajamas ho an'ny fianakaviana iray manontolo
Handry amin'ny Summer
Sakafo vaovao Ducane "Tranon'ny sakafo"
Mifatotra ny fitoeran-jiro eo amin'ny valin-dambany
Nambaran'ireo insiders ny antsipiriany momba ny fahaterahan'i Amal Clooney